မုန်တိုင်း နာဂစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည်မှာ ၁၂ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ
By ဇော်ငြိမ်းဦး (MPA) 30 May 2020
နာဂစ်မုန်တိုင်း ၁၂ နှစ်ပြည့် မှတ်တမ်းကို သူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံ အပေါ်မူတည်၍ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ အချက်အလက်များနှင့် Social Media ပေါ်တွင် တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတွင်အသေအပျောက် အပျက်အစီး အများဆုံး၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈ မုန်တိုင်း နာဂစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့သည်မှာ ၁၂ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီကို အမှတ်ထင်ထင်ရှိမိသည်။
အာရေဗျဘာသာ ဖြင့် ပန်းဟုခေါ်သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်း၏ မညှာမတာရှိုက်နမ်းမှုကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီခန့်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီတိုင်းကို နေ့ခင်းဘက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း ၁ နာရီ ၁၀၅ မိုင်ကနေ ၁၃၀ ထိရှိခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းတော့ ညနေပိုင်း ၆ နာရီလောက်တွင်တော့ မုန်တိုင်းဒီရေတက် လာသည်။ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီလောက်တွင် လေရောလှိုင်းရော ပေါက်လာခဲ့သည်။ နောက်တော့ မေလ ၃ ရက်နေ့ နေလည်ပိုင်းအထိ ပန်းတပွင့်၏ ရက်စက်မူကိုကြုံတွေ့ရတော့သည်။
FAC အမြန်သွား တိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ် တစီး၏ စစ်ရေယာဉ်မှူးအနေဖြင့် ရဲရင့်တက်ကြွသော စွန့်လွှတ်စွန့်စားသော အမိန့်နာခံသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော စစ်သည်များနှင့်အတူ ၁၁ နာရီခန့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် နာဂစ်ကာလ အဖြစ်အပျက်များက ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပျက်သွားနိုင်သည့် ဦးနှောက်၏ မှတ်ဉာဏ် တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ယခုတိုင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝက စာရေးဆရာမောင်သော်က ဗိုလ်မှူးဘသော်၏ တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးက လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစ၍ ဇူလိုင်လတိုင်း ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းတွင် အခန်းဆက်စောင့်ဖတ်ရသည်။ အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းတို့ ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းတို့က တော်တော်နာမည်ကြီးသည့် မဂ္ဂဇင်းတွေဖြစ်သည်။ ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းကို တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ ဆောင်းပါးကြောင့် လစဉ်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်္ဘောပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် အရာရှိစစ်သည် ၂၇ ဦး ရော်ဘာအသက်ကယ်ဖောင်နှစ်စီးဖြင့် သင်္ဘောကို စွန့်ခွာသည့်အကြောင်း၊ အသက်ကယ်ဖောင်တစ်စီးတွင် ရဲဘော် ၉ ဦး ပါဝင်ပြီး နောက်တစီးတွင် စစ်ရေယာဉ်မှူး အပါအဝင် အရာရှိနှင့် ရဲဘော် ၁၈ ဦးပါဝင်ကာ ၁၃ ရက်တိုင် ပင်လယ်ပြင်တွင် မျှောပါခဲ့ရာမှာ ဂျပန်ကုန်တင် သင်္ဘောတစီးက ကယ်ဆယ်ခဲ့သည့် အကြောင်းက စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းခဲ့သည်။ ရဲဘော် ၉ ဦးပါဝင်သည့် အသက်ကယ်ဖောင်ကို ရှာမတွေ့သလို စစ်ရေယာဉ်မှူးဦးစီး အသက်ဖောင်မှ ၈ ဦး တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အသက်ပေးခဲ့ရသည်က သတိရမှတ်မိနေသည့် အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝ လွယ်အိတ်ထဲတွင် ပါသည့် စာအုပ် ၂ အုပ်ရှိသည်။ တအုပ်က စာရေးဆရာ မောင်စိန်ဝင်း၏ သောကခြေရာရတနာ ကဗျာ၊ နောက်တအုပ်က တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ ဖြစ်ခဲ့သည်ကို အမှတ်ရမိသည်။ အဲ့ဒီတုန်းက အကြိုက်ဆုံးစာရေး ဆရာတွေက ဆရာမင်းလူနှင့် ဆရာငြိမ်းကျော် တို့ဖြစ်သည်။ ဂျူး၏ အမှတ်တရ စာအုပ်ကလည်း တယောက်က လက်ဆောင်ပေး၍ အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့သည်။
စာရေးဆရာ ဆရာမောင်သော်၏ တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ က မျိုးဆက်သစ်များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည်
တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ ၏ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပင် ကျနော် choice of arm တွင် ရေတပ်ကိုလျှောက်ခဲ့သည်။ တပ်မတော်(ရေ) စီမံခန့်ခွဲမှု အရာရှိငယ်သင်တန်းပြီးတော့ ဗျူဟာစစ်ရေယာဉ်စု တွင် WKC (Watch Keeping Certificate) အတွက် တွဲဖက်အရာရှိတွေအဖြစ် တာဝန်ကျသည်။ စတာဝန်ကျသည့် သင်္ဘောက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ ရေငုတ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေး ရေယာဉ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် သင်္ဘောကြီး မဟာရေယာဉ်ဟု အဲဒီအချိန်က ဆိုကြသည်။ ထိုစစ်ရေယာဉ်က ပင်လယ်ပြင်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသဖြင့် အမျိုးအစားတူသည့် စစ်ရေယာဉ်တစီးတွင် တွဲဖက်အရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ ၁၀ တန်း မေးခွန်းတွေ၊ အခြားဌာနဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပို့ဖို့ ကိုးကိုးကျွန်းကို ထွက်ရသည်။ Sea Training ပြီးတော့ ကိုးကိုးကျွန်းကို ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကလည်း ရှိနေသည်။ ကိုးကိုးကျွန်းတွင် ယခုလို ဆိပ်ခံတံတားမရှိသေး ကျောက်ချထားပြီး တိုင်းပြောင်းမိသားစုတွေ ရေယာဉ်ကြုံဝန်ထမ်းတွေ ပစ္စည်းတွေ ကိုလှေနဲ့ကဲ့ရသည်။ ကိုကိုကျွန်းတွင် အခြေပြုတုန်း ပပလတပ်ခွဲလဲဘို့ အခြေနေဖြစ်လာသည်။ မုန်တိုင်းအတွင်းမှာပဲ တပ်ခွဲလဲဘို့ ၂ ခေါက်လောက် ကြိုးစားသည်။ အဆင်မပြေသဖြင့် တတိယအကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ အရာရှိငယ်ဘဝ ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
ဒုတိယပိုင်းကတော့ သူမနှင့် ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်မိသည်။ ဆိုးရွားရာသီအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အချက်များလို့ ပြောလို့ရသည့် (Heavy weather Precaution) က အရာရှိငယ် တွဲဘက် အရာရှိဘဝမှာ ကိုကိုးကျွန်းခရီးစဉ်ကနေ စာတွေ့ရော၊ လက်တွေ့ရော၊ သင်ယူခွင့်ရခဲ့သည့်ခရီးစဉ်တခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုကိုကျွန်း ကနေ မလိကျွန်းကို ဖြတ်မောင်းသည်။ မလိကျွန်းတွင် ကျနော့် မိခင်သင်္ဘော ပြောင်းတက်ရသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလ ဂျာမာန် U Boat တွေနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့် သင်္ဘောကြီးကတော့ စစ်ရေယာဉ် တစီး၏ မာန်၊ အလှ ဆွဲဆောင်မှုတို့နှင့် ပင်လယ်ပြင်ကြံ့ခိုင်မှုတို့က အပြည့်ရှိသည်။ သင်္ဘောစာကြည့်တိုက်တွင် Semanship Navigation စာအုပ်တွေက အစုံအလင် ရှိသည်။ Watch officer guide စာအုပ်ကလည်း ကျနော့်အတွက် အသုံးဝင်သည်။
အက်ဒမန်ပင်လယ်၊ တနင်္သာရီကမ်းရိုတန်း၏ ရေပြင် (၁၂) မှာစစ်ဆင်ရေး ဝင်ရသည်။ အဲ့ဒီ့အချိန်ကာလ GPS ကနေ တနာရီ တခါ၊ တည်နေရာပို့ပေးသည့် စနစ်ကို ရနေပြီဖြစ်သည်။ Radar Fix ဖြင့် တည်နေရာကို ရေပုံပေါ်တွင် တင်ရတာကို သဘောကျသည်။ ရေပုံနံပါတ်တွေ အလွတ်ရလာသည်။ ရေပုံထဲက ကျွန်းနာမည်ကို အလွတ်ရလာသည်။ ကျွန်းနာမည်တွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသည်။ Father and Son တို့ Hen and Chicken တို့ Sister Group ဆိုသည့် ကျွန်းအုပ်စုမှာတော့ မာရီယာတို့ အမ်းတို့ Eliza တို့ဆိုသည့် အမျိုးသမီး နာမည်လှလှတွေ ပေးထားသည်။ ပင်လယ်က ဗွီးပင်တွေပေါက်ပြီး တော်တော်သာယာသည့် ကျွန်းနာမည်က Pinetree ဟုခေါ်သည်။ ယခုတိုင် မမေ့သေးသည့် နာမည်တွေထဲတွင် Janitor Shoal တို့ Carpenter Rock တို့ကလည်း ရေပုံတွင် ကြည့်ရင်း စွဲကျန်ခဲ့သည့် နာမည်တွေဖြစ်သည်။ Bay of Bangel Pilotage ထဲမှာတော့ စိတ်ဝင်စားသည့် ကျွန်းနာမည်တွေကို ရှာဖွေဖတ်ခဲ့သည်။
Loughborough လာဘိုရာ ကျွန်းနားမှာ တရားမဝင် ငါးခိုးဖမ်းနေသော တဖက်နိုင်ငံ ငါးဖမ်းလှေ ၃ စီးကို တညတည်း ဖမ်းခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံက ပထမဆုံး ရင်ခုန်စိတ်တတ်ကြွဖွယ် အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ စက်ကုန်ဖွင့်ကာ မောင်းပြေးနေသည့် ငါးခိုလှေ၊ ရေယာဉ်ပေါ်သို့ မိမိစစ်ရေယာဉ်ဖြင့် အတင်းထိုးကပ်ပြီး လှေသိမ်းတပ်ဖွဲ့ဖြင့် တက်သိမ်း၊ ရှင်းရသည်က အရာရှိငယ်တစ်ယောက်အတွက် အတော်ချိုမြိန်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး တွဲဘက်အရာရှိတာဝန်ကျသည့် သင်္ဘောက ရန်ကုန်ပြန်ဝင်ပြီး တပတ်လောက်ကြာတော့ ယာယီတွဲဘက်အရာရှိဆိုပြီး ရန် ၀၃၇ ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေး ရေယာဉ်တစီးပေါ် တက်ရသည်။ ယာယီတွဲသာဆိုသည် အဲ့ဒီသင်္ဘောမှာ စစ်ရေယာဉ်မှူး ၃ ဆက် မှီလိုက်သည်။ ၂ နှစ်ခန့် ကြာခဲ့သည်။ မြိတ်ကျွန်းစုတွေကို အလွတ်ရစေသည်။ မျှော်စင်နှင့်တူသည့် Tower Rock, ခြင်္သေ့နှင့် တူသည့် Lion Rock ညနေ နေဝင်ချိန်မှာမြင်ရသည့် အရသာက မိမိနိုင်ငံ၏ သဘာဝရှုခင်းအလှ၊ မြန်မာ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအလှကို ခံစားတတ်စေသည်။ ယစ်မူးမိန်းမောအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းသည်။ Great Western Torres သို့လည်း ဒကစမှူး(မြိတ်) နဲ့ အဖွဲ့ တင်ပြီးရောက်ဖူးခဲ့သည်။
ယခု Andamanresort ဖွင့်ထားသည့် macleod ကျွန်းပေါ်သို့ တာဝန်အရ တက်ရှင်းဖူးသည်။ searoom ကျယ်သည်။ ကျောက်ချနိုင်သည့် ရေအနက် ရှိသည်။ လေကွယ်သည်။ ဖြူလွလွသဲသောင်ပြင်ရှိသည်။ မက်ကေး မကင်ဇီစသည့် ကျွန်းနံမည်တွေက တကျွန်းနဲ့ တကျွန်း သိပ်မဝေး။ ရေအောက် coralreef တွေ အလှကိုလည်း ကျွန်းဖိလာတွင် ရေငုတ်ရင်း ခံစားဖူးသည်၊ နေ့လည်စာစားပြီးတာနဲ့ စာသင်သည့် စစ်ရေယာဉ်မှူးနဲ့လည်း ကြုံဖူးခဲ့သည်။ Sextant တွေနဲ့ ကျနော်တို့ အရာရှိငယ်တွေ sight တွေ ဆွဲရသည်။ ပုစ္ဆာတွေတွက်ရသည်။ Nautical Almanac စာအုပ်ကလည်း Update ဖြစ်သည်။ Marpass တွက်ရသည်။ ညနေ Sunset မှာလည်း Compass Error အတွက် ပုစ္ဆာပေးပြန်သည်။ အဲ့ဒီအချိန် ကျနော်က စစ်လက်နက်အရာရှိ ဆိုတော့ Duty Watch က ည ၁၂၊ မနက် ၄ ဆိုတော့ မွန်းတည့်နေကို ကြည့်ပြီး Sextant နှင့် Sight ဆွဲရသည်က မျက်လုံးကို တော်တော်ကျိန်းစပ်စေသည်။
စာသင်ချိန်ပြီးရင် သူ့ညီငယ်တွေလိုဘဲ နေခဲ့သည့် စစ်ရေယာဉ်မှူး သူ အခုတော့ မရှိတော့။
ငယ်ငယ်တုန်းက စွဲလမ်းဖူးသော ဆရာမောင်သော်က၏ တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ အဖြစ်အပျက်ကို မောင်းမကန်လောင်းလုံဘုတ်ကို ဖြတ်တိုင်း အမှတ်ရဖြစ်သည်၊ ဗိုလ်မှူးဘသော်ရဲ. တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ မြုပ်ခဲ့တဲ့နေရာက Moscos Island ၏ အနောက်ဘက် မိုင် ၂၀ ခန့်အကွာလို့ ဆိုသည်။ ရေကြောင်းအထောက်အကူပစ္စည်းတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ မရှိသည့် အချိန် ၁၉၅၆ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ တည်နေရာ အတိအကျ မလွယ်လှ။
Moscos ကျွန်းက ကျွန်းကြီး ၃ ကျွန်းရှိသည်။ North Moscos, Middle Moscos နှင့် South Moscos တို့ဖြစ်သည်။ ရာသီအလိုက်လေကွယ်ရာအရပ်တွေ၊ ကျောက်ချရန် နေရာတွေကို ရေပုံထဲမှာ ပြထားသည်။ North Moscos ထိပ် ရေပြင်တွင် တော့ လေယာဉ်ပျက်တစီး နှစ်စီးကို ရေပုံထဲတွင်တွေ့ရသည်။
ရေတပ်စခန်း ရေယာဉ်စုတွေ၊ ဌာနချုပ်တွေမှာ တာဝန်အသီးသီးထမ်းဆောင်ရင်း ကျနော်လည်း (D) Class စစ်ရေယာဉ်မှူးဖြစ်လာသည်။ (C) Class စစ်ရေယာဉ်မှူးဖြစ်လာသည်။ ယာယီ ဒု-စစ်ရေယာဉ် မှူး (ဗိုလ်မှူး) အဖြစ်နှင့် နာဂစ်ကာလတွင် ကျနော် စစ်ရေယာဉ်မှူးအဖြစ် ကိုင်တွယ်ရမည့် သူမနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံသည်။ အက်ဒမန်ရေပြင်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း အင်ဂျင် -Turbo တင်ရာမှ စက်တလုံး ထိခိုက်ချိန် ကျနော်ပဲ့စင်တွင် ရှိနေခဲ့သည်။ သူမအပျိုရည်ပျက်ပြီပေါ့ ဆိုသောအခါ ရှေ့မီနောက်မီ ကုန်းပတ်မူး CPO က ဆင်းတဲ့သင်္ဘောတိုင်း ပြဿနာ တက်လေ့ရှိသော အင်ဂျင်နီယာအရာရှိကြီး လက်ထက်တွင်လည်း အင်ဂျင်ပြဿနာဖြစ်ဖူးကြောင်း၊ ဟိန်းဇဲက အထွက်မှာလို့ ဆိုသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် ရေမှ တပ်တော်ဝင် စစ်ရေယာဉ်တစီး
ကျနော်တို့က ရေယာဉ်တွေကို သူမ, She ဟု ဣတ္ထိလိင်ကို ကိုယ်စားပြု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဆိုလျှင် သင်္ဘောသား ယောက်ျားတွေက သင်္ဘောကို ချစ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးတယောက်ကို ချစ်သကဲ့သို့ ချစ်ကြသည်။ သင်္ဘောဆိုသည်က အမျိုးသမီးတယောက်ကဲ့သို့ ခန့်မှန်းရ ခက်ခဲသည်။ ဆိုရိုးစကားတခုရှိသည်။ “It takes an experienced man to handle her correctly and withoutaman at the helm, she is absolutely uncontrollable”. အထိန်းအသိမ်းမတက်လျှင် ပြဿနာရှိသည်ဟု လို။
Let her, take good care of her, and she shall take good care of you ကို ပိုသဘောကျသည်။ သူမကို ဂရုစိုက်ရင် သူလည်း ပြန်ဂရုစိုက်မယ်ပေါ့၊ ရှင်းပါသည်။ စာသံ၊ ပေသံနှင့် အတည်အတံ့ဆိုလျှင်တော့ goddesses and mother, figures playingaprotective role in looking afteraship and crew၊ အလယ်ခေတ်အသုံးအနှုန်းက goddess ကတော့ ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်တာပေါ့။ အများကိန်းနှင့်ပြောတဲ့ Goddesses ကတော့ A female deity လို့ ဆိုနေတယ်။ ဘုရားသခင်လို၊ မိခင်လို သင်္ဘောသား တွေကို စောင့်ရှောက်တတ်လို့ သူမလို့ ခေါ်တယ်လို့ လန်ဒန်က National Maritime Museum က စာသားကို အမှတ်ရမိသည်။ ခရစ်စတိုဖာကိုလန်ဘတ်ရဲ့ နာမည်ကျော် အတ္တလန္တိတ်ခရီးစဉ်မှာတော့ သူ့သင်္ဘောနာမည်က La santa Maria နောက်တော့ အပျိုစင်မေရီပေါ့။
ဒုတိယအကြိမ် ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးဖြစ်နေသော သူမနှင့်အတူ ရန်ကုန်ရောက်သည်။ နောက်နေ့တွင် ထိုအချိန်က တပ်မတော် (ရေ)၏ ခေတ်အမှီဆုံး စရယဟုဆိုနိုင်သည့် ကော်ဗက်စစ်ရေယာဉ်နောက်ဆုံး အစီးသို့ ဒုတိယစစ်ရေယာဉ်မှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သတင်းပို့သည်။ ၎င်းနေ့ ညနေ့တွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ)နှင့် စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်(ရေ) တို့ကို တင်ဆောင်၍ ဟိန်းဇဲသို့ ထွက်သည်။ နောက်တော့ အတွင်းရေးမှူး (၁) နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများကို ကော့သောင်းမှတဆင့် ပထမအကြိမ် ဆလုံပွဲတော်၊ နောက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ခရီးစဉ်အတွက် ပင်လယ်ပြင်လုံခြုံရေး ထိုခရီးစဉ်တွင်တော့ sea room ကျဉ်းသော ကျောက်ထနောင်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်းသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးခဲ့သည်။ မှတ်မှတ်ရရ ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောကော်ပိုရေးရှင်းက အသေးဆုံး ကုန်တင်ရေယာဉ်တစ်စီး လာကပ်ထားသည်။ ရဟတ်ယာဉ်တက်တာနှင့် အဲ့ဒီသင်္ဘော ချက်ခြင်းကြီးကို ဆိပ်ကမ်းက ခွာတော့သည်။
နောက်ဌာနချုပ်သို့ ပြောင်းရွေ့ကြရာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရင်း၊ ဗျူဟာစစ်ရေယာဉ်စု စစ်ရေယာဉ်မှူး ဖြစ်လာတော့သည်။ သူမနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ဆုံခွင့်ရသည်။ Know your ship ကတော့ သင်္ဘောစက်ခန်းထဲက ကြမ်းခင်းပြား ဘယ်နှစ်ပြား ရှိသည်ကအစ အလွတ်ရသည်။ နောက် အရာရှိငယ်ဘဝက အတူတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတွေနှင့် ပြန်တွေ့ရသည်။ ပုံစံတူ FAC အမြန်သွား တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် ၃ စီးကို ဗိုလ်တစ်ထောင်အရှေ့ခြမ်း (၁) ဘွိုင်တွင် နေရာ ချထားသည်။ ကျနော့်သင်္ဘောက FAC ၄၅ မီတာတွေထဲမှာ ပထမဆုံး ရေချသည့် သင်္ဘောဖြစ်သည်။ နောက် အလယ်တွင် ၈ စီးမြောက် FAC နှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် ၅ စီးမြောက် FAC ရှိသည်။ Superstructure ကတော့ တစီးနှင့်တစီး အနည်းငယ်ကွဲလွဲသည်။
ပန်းတပွင့်ဟု အာရေဗျဘာသာ၊ Urdu ဘာသာဖြင့်ဆိုသည့် အပူပိုင်းဒေသမုန်တိုင်း နာဂစ်သည် ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲတွင် သန္ဓေတည်ခဲ့သည်။ အနောက်မြောက်ဘက်ကို တဖြည်းဖြည်းရွေ့ရင်း အားကောင်းလာခဲ့သည်။ နောက် ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့တွင်တော့ အရှေ့ဘက်ကို ရွေ့လျားတော့သည်။ နောက် အရှေ့မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့တောင်ဘက်ကို ရွေ့တော့သည်။
ပထမ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းကို ဘင်္ဂလားဒေရှ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေကို ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ နောက် မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်း တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာသည်။ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်း ပြောင်းခြင်းကလည်း ကျနော်တို့နိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာအတွက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့တွင် JTWC (joint typhoon warning center)က လေပြင်းမုန်တိုင်းအဆင့်မှ ဆိုင်ကလုန်းအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ပန်းဟုခေါ်သည့် မုန်တိုင်းက အကွေ့အကောက်တွေ လမ်းကြောင်းတွေပြောင်းပြီး မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်လာသည်။ မုန်တိုင်း၏ ပြင်းအားကလည်း လျော့နည်းလိုက်၊ အင်အားပြင်းလာလိုက် မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဧပြီ ၂၉ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် ရုတ်တရက် မုန်တိုင်းအား ပြင်းလာခဲ့သည်။ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် အရှေ့ဘက်တည့်တည့်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ပြီး လျင်မြန်စွာ ပြင်းအားကြီးလာခဲ့သည်။ ဧရာဝတီကမ်းခြေကို မုန်တိုင်းဝင်သည့်အချိန်က မုန်တိုင်းအဆင့် ၄ နှင့် ဝင်ဆောင့်ခဲ့သည်။ ၁ နာရီ လေတိုက်နှုန်းကို ကီလိုမီတာ ၂၁၁ ကနေ ၂၅၀ ပြင်အားထိ ဝင်ခဲ့သည်။ လပ္ပတ္တာကို ဝင်တော့ ပြင်းအားက ၃ ဖြစ်သည်။ ၁ နာရီ လေတိုက်နှုန်း ၁၇၈ ကနေ ၂၁၀ ကီလိုမီတာ အထိ ဖြစ်လာသည်။ မုန်တိုင်း ဒီရေတွေက ၂၅ မိုင်အထိ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ပန်းပွင့်ခြေသံက ခပ်ကြမ်းကြမ်းရယ် မုန်တိုင်းသတင်းရသည့်အချိန်ကစ၍ ဆိုးဝါးရာသီတွင် ဆောင်ရွက်ရန် အချက်တွေကို Check list နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်တန်းတက်နေသော တွဲဖက်အရာရှိများ သင်တန်းစေလွှတ်လိုက်ရသော ကုန်းပက်အရာရှိ၊ စက်မှုလက်မှုအရာရှိတွေ ရှိသလို အခြားရေယာဉ်တွဲဘက် တွေလည်းရှိသည်။ ဘာပဲပြောပြော ကျနော်တို့က ပန်းတပွင့်နှင့် ကခုန်ရန် အဆင့်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။
မေလ ၂ ရက်နေ့ မနက် မိုးဖွဲဖွဲရွာသည်။ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ၂ နာရီကျော်လျှင် ဒလ-ဗိုလ်တထောင် ကူးတို့ လှေတွေ သွားခွင့်မပြုသည့် သတင်းကို စကြားရသည်။ တနေ့လုံး မိုးရွာနေသည်။ ဟိုင်းကြီး ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် သတင်းကို ဆက်သွယ်ရေးစက်နှင့် နားထောင်သည်။ ၁၂ နာရီခန့်တွင် ဟိုင်းကြီးကို မုန်တိုင်းဝင်ဆောင့်ပြီး သိပ်မကြာခင် ဆက်သွယ်ရေး အဆက်အသွယ်ပြတ်သည်။ ပင်လယ်ပြင်တွင်ရှိသည့် ငါးဖမ်းသင်္ဘောလှေတွေ သတင်းနားထောင်သည့် အကုန်လုံး ဝင်ပြေးကုန်ပြီဖြစ်သည်။
ညနေ ၄ နာရီလောက် Swell တွေ စဝင်လာသည်။ တဖြည်းဖြည်း လှိုင်းက စိပ်လာသည်။ မုန်တိုင်းဒီရေ စတက်လာပြီး ကျနော့်သင်္ဘောက Weather Side လေဝင်ဆောင့်သည့် ဘက်ရောက်နေသည်။ ၈ နာရီ ၉ နာရီလောက်တော့ လှိုင်းတွေက ပိုကြမ်းလာသည်။ Ship Stability ရေယာဉ်တည်ငြိမ်အောင် ရေချိုးကန်ထဲတွင် ကြိုတင်၍ ရေတွေဖြည့်ထားသည်။ သို့သော် ၄၅ မီတာ၊ ၁၃၅ ပေခန့်သာ ရှိသော အမြန်ရေယာဉ်တွေအတွက် တစီးနှင့်တစီး လှိုင်းကြောင့် ရိုက်ကုန်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဘွိုင်ချည်သည့် B riddle (mooring cable) ၉ နာရီ ၄၅ ခန့်တွင် စပြတ်သည်။ နောက်သင်္ဘောချင်း ချည်ထားသည့် ကြိုးတွေပြတ်သည်။ ရေယာဉ်စခွာသည်။ မုန်တိုင်းက ဘယ်လောက်ကြာမည်ကို မခန့်မှန်းနိုင်။ ဘယ်အချိန် ပြီးပြတ်မည်ကို တွက်မရ။ ဘွိုင်ချည်ထားသော သင်္ဘောတွေကြား ကျောက်ချထားသည့် နိုင်ငံခြားကုန်တင် ရေယာဉ်များအကြား ပတ်မောင်းသည်။ လေကပိုကြမ်း လာသည်။ Wind Speed လေတိုက်နှုန်းက ၁၂၀၊ ၁၃၀ မိုင်ပြလာသည်။ ဘာရိုမီတာက ၉၆၂ M bar သို့ ထိုးကျသွားသည်။
အပျက်အစီးတွေ မျောလာတာ တဖြည်းဖြည်း များလာသည်။ ည ၁၁ နာရီကျော် အမေ့ထံမှ ဖုန်းလာသည်။ ၁၁ နာရီ ၃၉ တွင် ဝဲဘက် အင်ဂျင် Micro commander မရတော့။ Micro commander Electronic marine engine controls က Main Engine အတွက် စက်အတင်အချ Speed ရှေ့/နောက်၊ စက်ရပ် စတာတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ Stick ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင် ၂ လုံးဆိုတော့ ၂ ခုရှိသည်။ အီလက်ထရောနစ်လိုင်းတွေ Sensor တွေရှိသဖြင့် ဒီလိုအချိန်မှာ ပြန်ပြင်ဖို့ မလွယ်တော့။ ညာဘက်အင်ဂျင်က အရင်ပြဿနာတက်လို့ လဲထားသည့်အလုံး၊ စက်တလုံးတည်းနှင့် အပျက်အစီး တွေ ရှောင်ရင်း ထိန်းမောင်းနေရသည်။
ဒလဘက်ကမ်းသို့လည်း ရေစီးနှင့်တွန်းပို့သည်။ လေကြောင်း ပြောင်းနေသည်ဟု ယူဆရသည်။ ဒလက သစ်စက်ကရိန်းတွေ နားအထိ ရေမြှုပ်နေတာကို Search Light မီးရောင် အောက်တွင် မြင်တွေ့နေရသည်။ မျက်မြင်နှင့် ထိန်းမောင်းနေရသည်။ ညာဘက်စက်တလုံးသာ ရပ်သွားခဲ့လျှင် ဟုသည့်အတွေးက ဝင်လာသည်။ ညာဘက်စက်တလုံးရပ်သွားလျှင် သို့မဟုတ် မမျှော်မှန်းနိုင်သော ပြဿနာ ဖြစ်လျှင် အခြေအနေကို ထိန်းလို့ရမည်မဟုတ်တော့။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး နစ်မြုပ်နေသော သင်္ဘောအချို့ကို ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း တွေ့ရစဉ်
ဗိုလ်တထောင် သန်လျင် ကမ်းနားဘက်က မီးပြဌာနနားတွင် မီးပြသင်္ဘောဗေါယာကိုမြင်သည်။ မီးပြတခုကို ခေါင်းထိုးပြီး ကြိုးချည်ရန် ကြိုးစားသည်။ ပည ၁၂ တ က တယောက် ခုန်တက်သည်။ Long tow လုပ်ပြီး မုန်တိုင်းကို ရေရှည်ခံနိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆင်မပြေ ကြိုးချည်လို့ မရသဖြင့် နောက်တခါ မီးပြသင်္ဘောကို ခေါင်းထိုးကပ်သည်။ စစ်သည်နှစ်ယောက်တက်သည်။ လှိုင်းက အင်အားပိုကြမ်းလာပြီး ကြိုးရော ဝိုင်ယာကြိုးရော ပြတ်ထွက်သည့် ၎င်းအစီအစဉ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရသည်။ ချက်ချင်းရေယာဉ်ကို ပြန်ခွာရသည်။
အမြုပ်တွေ အပျက်တွေ ပိုများလာသည်။ ရေမျောပစ္စည်းတွေကို ရှောင်မောင်းနေရသည်။ ဗိုလ်အောင်ကျော် ကုန်သေတ္တာ တံတားကို ကပ်ရန် စိတ်ကူးရသည်။ ဆိပ်ခံတံတားတွင် အဲ့ဒီညတာဝန်ကျသည် တက်တက်ကြွကြွ အကူအညီပေးသည်။ ဝိုင်ယာကြိုးတွေ အခိုင်အမာ ချည်၍ ရေယာဉ်ကမ်းကပ်သည်။ ဆိပ်ကမ်းက တာယာအကြီးတွေ မိမိရေယာဉ်က တာယာတွေ ချထားသည့်တိုင် လေခပ်ပြင်းပြင်းနှင့် တံတားကို ဝင်စောင့်သည်။ စက်ပြန်နှိုး၍ ပတ်မောင်းသည့် အလုပ်ကို လုပ်ရပြန်သည်။ မြစ်သုံးပွင့်ဆိုင်ဘက်သို့ ရေယာဉ် ပါမသွားအောင်သာ ထိန်းမောင်းနေရသည်။ ပုဇွန်တောင်ချောင်း၊ ပဲခူးမြစ်၊ လှိုင်မြစ်တို့ဆုံရာဘက်သို့ မထွက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ထားကာ ရေယာဉ်ကို ကိုင်တွယ်သည်။
၃ ရက်နေ့ မနက် ၅ နာရီခန့်တွင် ကမ်းနားက ငှက်သံတွေကြားရသည်။ အလင်းရောင် တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာပြီ။ တံတားအပျက်အစီးတွေ အမြှုပ်တွေက ကမ်းနားတလျှောက်မြင်နေရသည်။ ဗိုလ်တထောင်ဆိပ်ကမ်းတွင် Pontoon အစွန်းနှင့် ထောက်နေသည့် ကုန်တင်သင်္ဘောတစီးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရသည်။ ကမ်းနားတလျှောက် အပျက်တွေသာ တွေ့နေသည်။ အလင်းရောင်သည် လူ၏ ကြောက်စိတ်ကို လျော့စေသည်။ မုန်တိုင်းဗဟို၏ လေကြောင်းလမ်း ပြောင်းရန် ခဏငြိမ်သွားသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။
သီလဝါဘက်ကို မတက်ဘဲ လှိုင်မြစ် ထီးတန်းဘက်သို့ တက်သည်။ လေကြောင်းပြောင်းသွားပြီး နာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်း လေပြန်တိုက်နေသည်။ ဆိပ်ခံတံတားပျက်တွေ စက်လှေအမြုပ်တွေ အတိုင်းသားမြင်နေရသည်။ နေ့လည် ၁၀ နာရီလောက် ဘာရိုမီတာ တဖြည်းဖြည်း ပြန်တက်လာသည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှမခံနိုင်၍ ကမ်းထိုးသွားသော မြစ်တွင်းသွား သင်္ဘောတွေ၊ ကမ်းရိုးတန်းသွားသင်္ဘောတွေ ရှိသည်။ ၁၀ နာရီ ၃၀ ထီးတန်းတံတား ယခင် Floating Hotel ရှိသော နေရာတခုသာ မိမိသင်္ဘော ကပ်ရန် အခြေအနေပေးသည်။ ၎င်းတံတားတွင် အခြေချနိုင်ခဲ့သည်။
တချိန်က ပြဿနာတက်ခဲ့သော ညာဘက်အင်ဂျင်သည် ပြဿနာတခုမှမပေးဘဲ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း‌မောင်းနိုင်ခဲ့သည်က တော်တော်ကောင်းသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ စစ်ရေယာဉ်မှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ယုံကြည်စွာနှင့် လိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်စစ်သည်တွေ၏ စွမ်းဆောင်ချက် တွေကလည်း လေးစားဖို့ကောင်းသည်။ ဘာပဲပြောပြော အာရေဗျဘာသာဖြင့် နာဂစ်ဟုခေါ်သည့် ခပ်ရိုင်းရိုင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပန်းတပွင့်နှင့် ကခုန်ဖြစ်ခဲ့သည်က ဘဝမှာ အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျနော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်က စံပြအဖြေလည်း ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မည်။ မှန်ချင်မှလည်း မှန်မည်။ သို့သော် လူ လက်နက် ရေယာဉ် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပေါ်စေဘဲ မုန်တိုင်းကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ သူမသည်လည်း တပ်မတော်(ရေ)တွင် တပ်တော်ဝင်ရေယာဉ်တစီးအဖြစ် ယခုတိုင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
FAC အမြန်သွား တိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ်တစီး၏ စစ်ရေယာဉ်မှူး အနေဖြင့် ရဲရင့်တက်ကြွသော၊ စွန့်လွှတ်စွန့်စားသော၊ ပေးအပ်သောအမိန့်ပေါ်တွင် သံသယဝင်ခြင်း မရှိဘဲ ယုံကြည်စွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသော၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော စစ်သည်များနှင့် အတူ ၁၁ နာရီခန့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် နာဂစ်ကာလ အဖြစ်အပျက်များက ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပျက်သွားနိုင်။ ဦးနှောက်၏မှတ်ဉာဏ် တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ယခုတိုင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
မုန်တိုင်းကာလအတွင်း အခြားရေယာဉ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော စစ်ရေယာဉ်မှူးများ၊ အရာရှိစစ်သည်များ၊ ကျဆုံးသွားသော အရာရှိ စစ်သည်များ၊ သေဆုံးခဲ့သော မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ပြည်သူများအတွက် နာဂစ်မုန်တိုင်း ၁၂ နှစ်ပြည့် အချိန်တွင် ရင်မှာသိမ်းထားသော မှတ်တမ်းတပိုင်းတစကို ရေးဖြစ်သည်။ ပန်းနှင့်ပေါက်လို့ နာခဲ့သူတွေရှိသည်။ ထိထိခိုက်ခိုက် နာကျင်ခံစားရသူတွေရှိခဲ့သည့် အမှန်တရားကိုတော့ မည်သူမှ ငြင်းလို့ရမည် မထင်။
(စာရေးသူသည် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးဖြစ်သည်။။ သူ တပ်မတော်သား အရာရှိ ဗိုလ်မှူးဘဝက နာဂစ်ကာလတွင် ကိုယ်တိုင် တွေ့ ကြုံခဲ့ရသည်အား အမှတ်တရ ပြန်လည် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။)
Topics: နာဂစ်ကာလ စစ်ရေယာဉ်မှူးဘဝကို ပြန်အမှတ်ရခြင်း
ဇော်ငြိမ်းဦး (MPA) ဧရာဝတီ